China 3 oz solder mask plugging ENEPIG inorema yemhangura bhodhi vagadziri uye vanotengesa | Kangna
3 oz solder mask plugging ENEPIG inorema mhangura bhodhi
Heavy Copper PCBs anoshandiswa zvakanyanya muPower Electronics uye Power Supply masisitimu uko kune yakakwira zvazvino zvinodiwa kana mukana wekukurumidza kupfura kumusoro kwematambudziko azvino. Iyo yakawedzera huremu hwemhangura inogona kushandura isina kusimba pcbboard kuita yakasimba, yakavimbika, uye inogara-refu wiring chikuva uye inoregedza kudiwa kweakawedzera anodhura uye ane bulkier zvinhu senge Heat sinks, mafeni, nezvimwe.
Iko hakuna tsananguro yakajairwa yeheavy Copper pcb, kazhinji kana ukobvu hwemhangura hunopfuura 30z.
Iyo bhodhi inotsanangurwa seyakaonda mhangura bhodhi.
Yakakora mhangura bhodhi kuita: gobvu remhangura bhodhi ine yakanakisa yekuwedzera mashandiro, isinga ganhurwe neyakagadziriswa tembiricha, yakanyanya kusungunuka nzvimbo inogona kushandiswa okisijeni ichivhuvhuta, yakaderera tembiricha haina brittle uye imwe inopisa-yakanyungudika kutenderera, uye zvakare kudzivirira moto, ndeye -zvinhu zvinopisa. Mahwendefa emhangura anoumba yakasimba, isina chepfu, yekupfeka, kunyangwe munzvimbo dzinokanganisa mamiriro ekunze.
Zvakanakira gobvu remhangura ndiro: gobvu yendarira ndiro inoshandiswa zvakanyanya mumidziyo yakasiyana-siyana yemumba, zvigadzirwa zvepamusoro-soro, zvechiuto, zvekurapa nemimwe michina yemagetsi. Iko kuiswa kweakakora ndiro yemhangura inowedzera hurefu hwehupenyu hwebasa redunhu bhodhi rinova iro musimboti wezvigadzirwa zvemagetsi zvigadzirwa ,, uye panguva imwe chete, zvinobatsira zvikuru kurerutsa huwandu hwemagetsi emagetsi
Heavy Mhangura pcb nhema
Chero ipi pcb yekugadzira, ingave isina-mativi kana maviri-mativi inoumbwa neyendarira etching yekubvisa isingadiwe mhangura uye nzira dzekuisa kuti uwedzere ukobvu kune ndege, mapadhi, uye zvisaririra uye Plated-Kuburikidza-maburi (PTH). Iko Kugadzirwa kweHuremu Mhangura maPCB kwakada kufanana nekuvakwa kweRF-4 pcbs asi zvinoda hunyanzvi hwekugadzira uye electroplating matekiniki ayo anowedzera hukobvu hwebhodhi repamusoro pasina kushandura kuverenga kuverenga. Iwo makobvu eSurface Boards anokwanisa kubata akawedzera masimbi emhangura nekuda kwehunyanzvi hunyanzvi hunosanganisira kumhanya-mhanya, kuzviputira, uye musiyano kana kutsauka etching.
Iyo yakajairika nzira yekugadzira haishande kune Heavy Copper PCBs uye inogadzira isina kuenzana mitsara mitsetse uye yakanyanya-etched margins. Isu tinoshandisa epamberi ekurongedza matekiniki kuti tiwane Yakatwasuka mitsara uye yakasarudzika kumucheto micheto ine isingakoshe Maitiro edu ekuwedzera ekuwedzeredza anoderedza kuramba kwemhangura mitezo nokudaro inowedzera kupisa-kuitisa kugona uye kutsungirira kwekushisa kwekushushikana.
Iko Kuderedzwa mukupisa kwemafuta kunovandudza kupisa kwekupisa kugona kweseketi yako kuburikidza neyekupisa convection, conduction, uye radiation. Vagadziri vedu vano tarisawo pakuomesa madziro ePTH ayo anobatsira zvakati wandei nekudzikira huwandu hwesere uye kudzikisira kusagadzikana, tsoka-kudhinda, uye mutengo wekugadzira wese. Isu tinotora kudada kukuru nekuve imwe yeanodhura kwazvo uye mhando Heavy Mhangura maPCB vagadziri kutenderera pasirese.
Nekudaro, aya maPCB anosanganisira mutengo wakakwira kupfuura enguva dzose maPCB sezvo maitiro ekugwinya ane simba uye akaoma. Huge yakawanda yeCopper inoda kubviswa panguva yeiyo Etching maitiro. Zvakare, iyo lamination maitiro inoda kushandiswa kwePrepreg ine yakakwira resin zvemukati yekuzadza nzvimbo dziri pakati penzara dzemhangura. Saka, mutengo wekugadzira wakakwirira kupfuura wenguva dzose maPCB Zvakangodaro, isu tinoshandisa mubatanidzwa weBlue Bar Maitiro uye Yakadzika Mhangura nzira yekukupa iwe yepamusoro bhodhi pamutengo wakanakisa.
Kushandiswa kweheavy Copper PCBs
Isu tinogadzira uye tinopa aya maPCB apo panowanikwa kazhinji kana kamwe kamwe kune yakasimba yazvino uye yakawedzerwa tembiricha. Aya matanho akanyanyisa akakwana kukuvadza pcb yakajairwa uye kudaidzira Heavy Copper chinodikanwa icho zvakare chinodzikisira kuverenga, inopa yakaderera impedance, uye inogonesa tsoka diki uye muhombe mutengo wekuchengetedza. Pazasi pane dzimwe nzvimbo uye d zvinoshandiswa izvo Heavy Copper PCBs zvinoshandiswa mu:
• Masimba Ekuparadzira Masimba
• Simba Amplifier Module
• YeMotokari Simba rekuparadzira Junction Mabhokisi
• Simba Simba reRadar Systems
• Welding Midziyo
• HVAC Maitiro
• Nyukireya Simba Zvishandiso
Kudzivirirwa uye Kuwedzererwa Kudzorerwa
• Njanji Magetsi Masystem
• Solar Panel Vagadziri
Mumakore achangopfuura, kudiwa kweaya maPCB kwakawedzera mune ZveMotokari, zveMasoja, zvemakomputa, uye ekushandisa ekumaindasitiri. Kangna ane makumi emakore echiitiko mukugadzira Heavy Copper PCBs emhando yepamusoro. MaEnjiniya edu ane hunyanzvi anozvipira kusangana nematanho epamusoro uye kugadzira maPrimiyamu Mabhodhi anosangana nezvaunotarisira kuita uye zvinangwa zvebatsiro. Isu tinonzwisisa kuti Heavy Copper PCB dhizaini inouya nekuwedzera kuomarara uye nekudaro, isu tinonyatso kugadzirisa mibvunzo yese uye zvinetseke tisati taenderera nekugadzirwa.
Chinoita kuti isu tikoshe ndechekuti mabhodhi edu akagadziridzwa anopfuura nemumatanho akasiyana ehunhu hwehuhu husati hwaendeswa kune vatengi vedu. Yedu iri-mumba yemhando yekudzora dhipatimendi inovimbisa mhando yeiyo Inorema Mhangura maPCB uye inova nechokwadi chekuti chigadzirwa chekupedzisira chinosangana neakanakisa mhando uye hushoma kune hapana njodzi yekukundikana kwedunhu.
Pashure: Resin plugging gomba Microvia Kunyudza sirivheri HDI ine laser kuchera
Zvadaro: inokurumidza multilayer Yakakwira Tg Bhodhi nekunyudza goridhe yemodem